"Ihlathi SPA". Indlu yonke kunye negadi ziyafumaneka
Bagno, Lubelskie, Poland
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguStefan
Indlu yethu ibekwe kumgama oziikhilomitha ezi-2 ukusuka kumbindi weZwierzyniec, isiza sikwindawo ekhuselekileyo yehlathi, sibonelela ngentuthuzelo yokuphumla (kunye nomsebenzi). Zininzi izinto eziluncedo ezinje nge-wi-fi, iTV, iibhayisekile, iihammocks, izitulo, igazebo yebarbecue, iterrace egqunyiweyo, kunye nendawo yomlilo. Kwindlu yethu ungasebenzisa kwakhona i-sauna yaseFinnish. Indlela yebhayisekile yeVelo eGreen ihamba ecaleni kwendlu. Kwindawo ekufutshane, unethuba lokufumana ubuhle beRoztocze. Siyakumema eKHAYA lethu, ukuze nawe, njengathi kunye nabahlobo bethu, ube ngumlingo wale ndawo.
Unayo yonke indlu kunye nendawo ebiyelweyo ejikelezileyo onayo. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlala elibanzi elinendawo yomlilo, ikhitshi elikhulu elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela. Kumgangatho wokuqala kukho amagumbi okulala amabini aphindwe kabini (enebhedi eyongezelelweyo yomntu omnye kwigumbi ngalinye), igumbi elinye lokulala (enebhedi eyongezelelweyo yomntu omnye) kunye negumbi lokuhlambela. Kwigumbi elingaphantsi kukho i-mini SPA (i-sauna yaseFinnish, ishawa), igumbi lokuhlambela, kunye negaraji eneebhayisekile kunye nommandla wokufaneleka wokuzivocavoca. I-terrace egqunyiweyo ebanzi inika ithuba lokuphumla kunye nokutya. Egadini kukho i-gazebo ye-grill, indawo yomlilo, i-swing, i-hammocks, i-deckchairs kunye nendawo yemidlalo yezemidlalo. Indlu ixhotyiswe ngemidlalo emininzi yokomelela, imidlalo yebhodi, iincwadi, kunye nemidiya ye-elektroniki (iTV yesathelayithi kunye neWi-Fi)
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, umatrasi ompontshwayo oyi- 1
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, umatrasi ompontshwayo oyi- 1
5.0 ·Izimvo eziyi-23
I-Roztocze ngummandla onomoya ococekileyo, owona mmandla mkhulu ePoland kwaye ugcwele indalo enomtsalane nangaliphi na ixesha lonyaka. IZwierzyniec yiperile yaseRoztocze enezikhumbuzo ezimangalisayo zeZamość Estate kunye nezinto ezininzi ezinomtsalane (uhambo lokuhamba ngephenyane, amahashe asePoland, uhambo lokuhamba intaba kunye nokuhamba ngebhayisekile, ibhiya evela kwindawo yotywala yasekhaya, umnyhadala wefilimu kunye nabanye)
pragmatyczny, odpowiedzialny, lubię podróżować i poznawać nowe rzeczy, nowych ludzi, cenię sobie przyjaźnie i dobre relacje w szerokim kręgu bliskich osób.
Ngefowuni, nge-imeyile nange-Airbnb
Iilwimi: English, Italiano, Polski, Русский, Español